01/01/2012 - 02/01/2012 - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
နာယက ဦးတင်ဦး ပဲခူးတိုင်းအတွင်း တိုင်းအောင်နိုင်ရေး ရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ် (ရုပ်/သံ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းအောင်နိုင်ရေး ခရီးစဉ်
ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့နဲ့ ၂၉ ရက်နေ့တွေမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိ အဖွဲ့နာယက ဦးတင်ဦး ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ ပဲခူးတိုင်း
ဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေဆီ သွားရောက်ကာ တိုင်းအောင်နိုင်ရေး ရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ပွဲနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မိတ်ဆက်ပွဲ
အခမ်းအနားတွေကို ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထားဝယ်ဒေသ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အပေါ် သတင်းဌာနအသီးသီးရဲ့ သတင်းတင်ပြပုံတွေကိုကြည့်ရင်း နားထောင်ရင်းနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-နှစ်နီးပါးခန့်က ကျနော်တို့ တင်ပြခဲ့ဖူး တဲ့ ဒီပဲယင်းခရီးစဉ်တင်ပြပုံနဲ့ အတော်ကွာခြားသွားပီဆိုတာကို သတိထားလိုက် မိပါတယ်။
၂၀၀၃ မေလ ဒီပဲယင်းခရီးစဉ်တုန်းကဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ ဘယ်နေ့ ဘယ်ကို သွားမယ်။ ဘယ်နေရာမှ ဟောပြောပွဲလုပ်မယ်။ ဒေသခံလူထုအခြေနေက ဘယ်လိုရှိတယ် စသဖြင့် ကြို သိနိုင်ဖို့ တယ်လီဖုန်းကိုဘဲ့အားကိုးပီး တချိန်လုံးဆက်နေရပါတယ်။ နော်ဝေး ကနေ မြန်မာနိုင်ငံဆီဖုန်းခေါ်ရ တာကလဲ ခက်သလားမမေးနဲ့။ ဆယ်ခါခေါ် တခါလောက်ဘဲ့ ၀င်ပီး ဈေးကလဲ အင်မတန်ကြီးပါတယ်။
အဲဒီလိုခဲရာခဲဆစ်မေးထားရတဲ့သတင်းတွေကို ည ၈-နာရီ ၉-နာရီဝန်းကျင်မှာ ကျနော်တို့ ပြည် ပအခြေစိုက် ရေဒီယိုတွေက ပြန်လွင့်တော့မှ တပြည်လုံးက လူထုက သိခွင့်ရတဲ့အခြေနေ မျီုးပါ။ တယ် လီဖုန်းဆက်လို့မရတဲ့နေ့ဆိုရင် ကျနော်တို့လဲ ဘာမှကိုလွင့်စရာမရှိတော့ သလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ သတင်းလိုက်ရတာက ဒီပဲယင်းခေတ်ကလိုမဟုတ်တော့။ တယ်လီဖုန်းခ ကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ ဘယ်နေ့ ထားဝယ်ကိုရောက်မယ်။ ဘယ်နေရာတွေ ကိုသွားမယ်။ ဒေသခံလူထုက ကြိုဆိုဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်နေတယ် ဆိုတဲ့သတင်းတွေ။ အထူးသဖြင့် ဓါတ်ပုံ တွေကို Face book မှာ မီနစ်ပိုင်းအလိုက် တက်လာနေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
နည်းပညာက မီဒီယာကို ခေတ်ပြောင်းစေသလား
ဒီမေးခွန်းက မေးစရမလိုလောက်အောင် ရှင်းနေတဲ့မေးခွန်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ဒီပဲယင်းခေတ်နဲ့ ဒီနေ့ခေတ် သတင်းတင်ပြပုံကွာတဲ့ အပြင် ၂၀၀၇-ရွေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကာ လနဲ့ ဒီနေ့ကာလ ကြားမှာတောင် သတင်းတင်ပြပုံတွေ က အတော်ကွာခြားသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၇ ၀န်းကျင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်ဖွင့်ပေးကာစဖြစ်ပီး သတင်းဓါတ်ပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်တင် ရင် အီလက်ထရောနစ်ပုဒ်မတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးထောင်ချနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အီးမေးလ်ပိုမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၆၅-နှစ်စီကျသွားခဲ့တဲ့ မင်းကိုနိုင် အပါဝင် ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်း သားတွေ။ ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်လို ပုဂိုလ်တွေကိုကြည့်ရင် သိသာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အခြေနေက ဒီလိုမဟုတ်တော့။ အီလက်ထရောနစ်ပုဒ်မနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ အပါဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးနီးပါးကို ပြန်လွတ်ပေးထားတဲ့အချိန်။ အင်တာနက်တွေကို အ ယင်လိုသိပ်မထိမ်းချုပ်ဘဲ အတိုင်းတာတခုအထိ လွတ်ပေးထားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ အင်တာနက်သုံးသူ တွေဟာ ကြောက်ရွံ့စရာမလိုဘဲ အမည်ရင်းတွေနဲ့ကို Face book ပေါ် ပေါ်တင် တင်နေကြတာဟာ တ ကယ့်အားရစရာ အပြောင်းလဲတခုအဖြစ် ကျနော်မြင်မိပါတယ်။
ဒါက Social media အပိုင်းပါ။ ဂျာနယ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ၂၀၀၃။ ၂၀၀၇ နဲ့ အခု ၂၀၁၂ အကြား လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်းဖြစ်စဉ်တုန်းကဆိုရင် ဘယ် ဂျာနယ်ကမှ မရေးရဲတဲ့အပြင် ရေးခွင့်လဲမရှိပါဘူး။ ၂၀၀၇ မှာလဲ အလားတူ ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ့။ ထူးထူး ခြားခြား ဂျာနယ်တွေရဲ့အခန်းကန်ဒကို ကျနော်မတွေ့မိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အခု ၂၀၁၁ နှောင်းပိုင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးတဲ့သတင်းကနေစ ဂျာနယ်တွေရဲ့အခန်းကန်ဒ အတော်အရေးပါလာပီး သူတို့ရဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်ပေါ်မှာ ထူးခြားသတင်းတွေကို မီနစ်ပိုင်းအလိုက်ဖေါ်ပြလာနိုင်တာဟာ ဒီနေ ဂျာနယ်မီဒီယာခေါတ်ရဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပမီဒီယာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်းခေါတ်ကနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့။ တယ် လီဖုန်းအခြေခံ မီဒီယာကနေ သတင်းထောက်ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းပေးပို့တဲ့သတင်းတွေအဖြစ်သို့ အ သွင်ပြောင်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းပြောင်းလဲမှုရဲ့ နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကတော့ DVB, VOA, RFA TV တွေပေါ်လာတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-နှစ်ဝန်းကျင် ၂၀၀၃- ဒီပဲယင်း ကာလတုန်းက ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအမြင်။ သဘောတရားအယူအဆအပြောင်းအလဲနဲ့ မီဒီယာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထားဝယ်ဒေသခရီးစဉ် သတင်းတင်ပြပုံ အပြောင်းလဲနဲ့ပါတ်သက်ပီး ကျနော်စဉ်းစားနေစဉ်မှာ တိုက်ဆိုင်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတပုဒ်ကတော့ ပြည်ပက မီဒီယာသမား တွေပါ ပါဝင်တဲ့ မီဒီယာ စီမီနာကြီးတခု ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။
ဒီ စီမီနာ ဘယ် လောက်အလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုပီး စောဒကတက်သူတွေရှိကောင်းရှိနေ နိုင်ပေမဲ့ ပြည်ပမီဒီယာနဲ့ ပြည်တွင်း မီဒီယာသမားတွေ။ အစိုးရအရာရှိတွေအပါဝင် အားလုံးစားပွဲတခုတည်းထိုင်ပီး မီဒီယာအကြောင်း ဆွေးနွေးနိုင်တာကိုက မီဒီယာ ခေတ် အပြောင်းလဲတခုအဖြစ် ကျနော်က မြင်ပါတယ်။
"ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး အဆိုးမြင်ဝါဒီများအား ဆန့်ကျင်ကြ"
"BBC, VOA ရန်တိုက်ပေးနေသည်။"
"RFA, DVB သွေးထိုးနေသည်။"
"ခလောက်ဆံ အကောက်ကြံ။ လေလှိုင်းသံ လူသတ်သမား။ နားမယောင်လေနဲ့ သတိထား"
ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကို နေ့စဉ်ထုတ် အစိုးရသတင်းစာနောက်ကျောဖုံးကနေ ဖယ်ပီးလို့ သိပ်မကြာ သေး ခင်မှာ အဲဒီသတင်းဌာနက ဌာနမှုးတွေကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်က မီဒီယာ စီမီနာမှာ အစိုးရပြန်ကြားရေး အရာရှိတွေနဲ့ စကားတခုတည်းထိုင်ပီး ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းတွေအထိ ဘယ် လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ လက်ရှိအစိုးရအပါဝင် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာပါဝင်ပါတ်သက်နေသူတွေရဲ့ နိုင်ငံ ရေးအမြင်။ သဘောတရားအမြင်တွေပြောင်းလဲလာတာကြောင့်လို့ ကျနော်ကမြင်ပါတယ်။ လက်ရှိ အစိုးရကသွားနေတဲ့ လွတ်တော်အခင်းအကျင်းသစ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုပုံစံသစ်။ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုပုံစံသစ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပုံစံသစ်တွေပြောင်းလာရာကနေ Sate Holder တွေရဲ့ စဉ်းစားပုံတွေ။ Mindset တွေ။ သဘောတရားခံယူချက်တွေပြောင်းလဲလာတယ် လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဆရာကြီး ဒဂုံတာရာရဲ့ စကားလုံးကို ငှားသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ "ရန်သူမရှိ မိတ်ဆွေသာရှိ။ နိုင်ငံ ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်" ဆိုတဲ့ ဒသာနသစ်ကို မြန်မာနိုင် ငံသားတွေလက်ခံလာတဲ့သဘော။ အမြင်မတူ တို့ရန်သူဆိုပြီး နှစ် ၆၀။ နှစ် ၄၀။ နှစ် ၂၀- တိုက်လာတာ တွေကိုရပ်တန့်ပီး အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှ ငါတို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး သူများတိုင်းပြည်တွေ သူများနိုင်ငံတွေနောက် အမှိလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ အမြင်မှန်ရလာတဲ့သဘောလို့ ကျနော်က မြင်မိပါ တယ်။
အရေတွက်မှ အရည်ချင်းသို့ မီဒီယာသမားတွေကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲရေး
နည်းပညာအရအပြောင်းအလဲ။ သဘောတရားအရ အပြောင်းလဲတွေပီးတဲ့အခါမှာတော့ မီဒီ ယာ သမားတွေကိုယ်တိုင်အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လိုနေပီဆိုတာကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တော့ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်းခေါတ်ကလို တယ်လီဖုန်းဆက်မရလို့။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းမကြည်လို့ "သီးခံပါခင် ဗျား" ဆိုပီး ကျနော်တို့ ဆက်လက် ဆင်ခြေပေးနေလို့မရတော့။ "ဒီသတင်းနဲ့ပါတ်သက်ပီး အစိုးရတာ ၀န်ရှိသူတွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျား" ဆိုပီးလဲ ကျနော်တို့ ဆက်လက် ဆင်ခြေပေးမနေသင့်တော့ပါ။
နောက်တခါ ၂၀၀၇ ရွေဝါရောင်တော်လှန်ရေးခေါတ် ကလို လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပီး "လုံခြုံရေး အခြေနေအရ ပုံတွေကိုခိုးရိုက်ရလို့ တုန်-မှုန်ခြင်း သီးခံပါခင်ဗျား" ဆိုပီး ကျနော်တို့ ဆက်လက် ဆင် ခြေပေးနေရင်လဲ ပရိတ်သတ်က လက်ခံမှာမဟုတ်တော့။ အင်တာနက်နှေးလို့ပါလို့ အကြောင်းပြပီး ကိုယ်သတင်းထောက်ဆီကပုံမရဘဲ့ Face book ပေါ်က ပုံတွေချည်းစွတ်တင်ပြသနေတာမျိုးကိုလဲ ပရိ သတ်က လက်ခံမှာမဟုတ်တော့။ ကျနော်တို့အားလုံး သတင်းထောက်ပီပီ ကွင်းထဲဆင်းပီး အလုပ်လုပ် ကြ ရပါတော့မယ်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဝေးကွာမှု။ ဆက်သွယ်ရေးအားနဲမှု။ နည်းပညာအားနဲမှု။ လုံခြုံရေးစိတ်မချရမှု စသဖြင့် စသဖြင့် အယင်ကရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အကန့်အသတ်တွေကို ကျနော်တို့ ကျော်ဖြတ်ဖို့အချိန်ရောက်နေပါ ပီ။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့ မီဒီယာ သမားတွေအားလုံး အလုပ်ကျိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
တနာရီစာ သတင်းပြည့်ရေး။ နာရီဝက်စာ သတင်းပြည့်ရေးကို ဦးစားပေးခဲ့တဲ့ ခေတ်က နေ အဲ ဒီတနာရီစာလွင့်တဲ့သတင်းတွေက ပရိတ်သတ်အတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးရှိနိုင်သလဲ။ လွင့်တဲ့သ တင်းတွေအားလုံး စံချိန-စံညွန်းမှီရဲ့လား။ သတင်းကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရဲ့လား။ စသဖြင့် အရေတွက်ခေတ်က အရည်ချင်းခေတ်ကို ကျနော်တို့ပြောင်းရပါလိမ့်မယ်။ တက်လှမ်းရပါလိမ့်မယ်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံက လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာတွေလိုမျီုးဖြစ်လာအောင် ကျနော်တို့ မီဒီယာသမားတွေ ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ နိုင် ငံတကာနဲ့ယှဉ်နိုင်တဲ့သတင်းတင်ပြမှုတွေဖြစ်လာအောင် ကျနော်တို့ ကျိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေ ဒါတွေဟာ ဒီနေ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မီဒီယာ ရေစီးကြောင်းအပေါ် ရှုမြင်ချက်ဖြစ်ပါ တယ်။ တချိန်တည်းမှာဘဲ့ လက်ရှိတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေ နောက်ပြန်ကျ မသွားအောင်။ လူသုံးများနေတဲ့စကားလုံအရဆိုရင်တော့ "နောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတော့တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အ ပြောင်းလဲ" ဖြစ်သွားအောင် ကျနော်တို့အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းကျိုးပန်းဖို့ အချိန်ရောက်နေပီဖြစ်ကြောင်း တင် ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကွေးတိုင်း မြိုင်မြို့ က ရွာနှစ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းလေ့လာ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မကွေးတိုင်း မြိုင်မြို့နယ်က ပေပင်တိုက်ကျေးရွာနဲ့ ကျစ်ကြီးကျေးရွာကို အန်ဂျီအိုတခုဖြစ်တဲ့ The Adventist Development and Relief Agency (ADRA) က လုပ်ထားတဲ့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်နဲ့ ကျေးရွာ ရေရရှိရေး အစီအစဉ်တွေကို သွားရောက် ကြည့်ရှုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပခုက္ကူ ဒေသခံများ ကြိုဆို နေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ရိုက်တာ)
ဒီခရီးစဉ်မှာ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီးလည်း လိုက်ပါသွားတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်သူတွေက ပြောပါတယ်။
“မြို့ဝင်ကတည်းက အသစ်ဆောက်ထားတဲ့ တံတားကြီး ဒီဘက်ထိပ်ကနေ လူတွေက ဒေါ်စုကို ၀ိုင်းပြီးတော့ ဟိုဘက် ဒီဘက် ညှပ်ပြီးတော့ နှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ကားကတော့ ရပ်ပေးလို့ မရတော့ လုံခြုံရေး လူငယ်တွေနဲ့ပဲ သူတို့ ပန်းစည်းတွေ ပေးကြတယ်။ နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေဆိုပြီး။ မြို့ဖြတ်သွားတဲ့ လမ်းတလျှောက် လူတွေကတော့ ပြည့်ကျပ်နေတာပဲ။ ဒီခရီးစဉ်က စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် မဟုတ်တဲ့အတွက် မြို့တွေကို ပြောမထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ညောင်ဦးရော ပခုက္ကူရော ၀ိုင်းပြီးတော့ ကြိုကြတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အချိန်တောင် နည်းနည်းနောက်ကျနေပါတယ်။ ညနေလေယာဉ်နဲ့ ဒေါ်စုက ရန်ကုန်ကို ပြန်မှာပါ။”
ဒေသခံတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာစေကြောင်း ၀ိုင်းနှုတ်ဆက်ကြသလို လက်ကမ်း ကြိုဆိုတာတွေ၊ ပန်းစည်းပေးအပ်တာတွေ လုပ်ဆောင် ကြိုဆိုကြပါတယ်။
ပခုက္ကူမြို့က သံဃာတပါးက မနက် ၉ နာရီကျော်ခန့်မှာ ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေသခံတွေ ကြိုဆိုပုံမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ခုလို မိန့်ပါတယ်။
“အင်မတန်ကို အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ လူထုတွေက အင်မတန်ကို ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ ဟို လူထုကို မလာရင် ဒဏ်ငွေနဲ့ဆင့်ခေါ်လို့လာရတဲ့ ပုံမျိုးတွေနဲ့ တခြားစီ။ မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဘယ်မှသွားလို့မရအောင် ကားတွေပိတ်သွားတယ်။ ကားတွေရော လူတွေရော လူထု လူတန်းစား အလွှာအသီးသီးက လာကြတာလေ။ အရင်တုန်းကဆိုရင် လူတွေ ထွက်ကြည့်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အခုတော့ တမြို့လုံး ရဟန်းရှင်လူ အကုန်လုံး သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုကြတယ်။ တချို့ဆို တို့သေပျော်ပါပြီကွာ ဒေါ်စုကိုတွေ့ဖူးပြီ ဆိုပြီး ဒါမျိုးတွေ အော်သွားတဲ့ လူတွေလည်း အများကြီးပဲလေ။”
ဒီခရီးစဉ်အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင် လူငယ်တွေရော၊ ဒေသခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရော ၀ိုင်းဝန်းလုံခြုံရေး ယူပေးကြတယ်လို့ ခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါနေတဲ့ ဒေါက်တာကြည်မင်းက ပြောပါတယ်။
အဲဒီရွာက ဖွံ့ဖြိုးရေလုပ်ငန်းတွေကို လေ့လာပြီးတဲ့နောက် ညနေပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ကို ညောင်ဦးမြို့ကနေ လေယာဉ်နဲ့ ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ADRA အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း တရာကျော်မှာ လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင် ကူညီနေတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းတွင် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း ဧပြီ၊ မေလလောက်တွင် စနိုင်မည်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ က​မ္ဘောဇဘဏ်အနေနဲ့ လာမယ့် ဧပြီ မေလလောက်မှ လုပ်ငန်း စတင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ဖို့အတွက် ထိုင်းမှာရှိတဲ့ ဘဏ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နေတုန်း ဖြစ်တာကြောင့် အဲ့ဒီလောက်မှ လုပ်ငန်းစနိုင်မယ်လို့ ဘဏ်-ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းမှာ က​မ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ ဖွင့်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့က ချက်ချင်းတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ ဦးသန်းလွင်က ပြောပါတယ်။
“အဲဒီအဆင့်ကတော့ ဒုတိယအဆင့် စဉ်းစားမှာပါ။ ချက်ချင်းတော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့က ထိုင်းက ဘဏ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်ရဦးမှာလေ။ ဧပြီ၊ မေလောက်ဆိုရင် စလို့ရပြီထင်တယ်။ ခန်းမှန်းတာပေါ့။”
ထိုင်းက ဘယ်ဘဏ်နဲ့ ချိတ်ပြီး လုပ်မယ်ဆိုတာကို ခုထိ ဆွေးနွေးနေတုန်းပဲလို့လည်း ပြောပါတယ်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ မိသားစုတွေဆီ ငွေလွှဲပို့တဲ့နေရာမှာ လုံခြုံစိတ်ချပြီး၊ လျင်မြန်ချောမွေ့စေဖို့ ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုလိုက်တာလို့ ဒီနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက် အခုလို မြန်မာပြည် ဘဏ်တခုက ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လာလုပ်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဦးကျော်သောင်းကတော့ ခုလို သုံးသပ်ပြောပါတယ်။
“ပထမဆုံးတခု အဆင်ပြေသွားမှာက အဆင်အပြေဆုံးတခုက ဘာလဲဆိုရင် ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေနဲ့ လုပ်ခွင့်ရရင် ကမ္ဘောဇဘဏ်ကို ပွဲစားတွေက ဆက်သွယ် လာလိမ့်မယ်။ ပွဲစားတွေက နယ်မြေတိုင်းမှာ လူခံလည်းရှိတယ်။ စက်ရုံလည်းရှိတယ်။ နယ်မြေက ဘန်ကောက်နယ်မြေ၊ စမွတ်ပလာကန်နယ်မြေ၊ မဟာချိုင်နယ်မြေ၊ ကော့သောင်း၊ ရနောင်းနယ်မြေ၊ အဲဒီနယ်မြေတွေက ပွဲစားတွေကတော့ လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီပွဲစားတွေက ကျနော် ပို့တဲ့ငွေတွေကို ခင်များတို့ဘဏ်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်အနှံ့ ပို့ပေးပါလို့ လွှဲပြောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲ သွားလိမ့်မယ်။ အလုပ်သမားတွေ သုံးစွဲဖို့ တော်တော်ကို လိုဦးမယ်။”
မြန်မာအလုပ်သမားအများစုဟာ ငွေလွှဲပွဲစားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အိမ်ကို ငွေပြန်ပို့နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအလုပ်သမား အများစုဟာ ဘဏ်နဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိကြတာများပြီး ဘဏ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ ပညာပေး ဟောပြောနေရတယ်လို့ ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ အလုပ်သမားပညာပေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိုထူးချစ်က ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာအလုပ်သမား နှစ်သန်းကျော် ရှိတယ်လို့ မြန်မာအစိုးရက သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး၊ လောလောဆယ် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ၉ သိန်း ၀န်းကျင်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ခွင့်ရရှိသည့် ဘဏ် လေးခုဖြစ်ပြီး၊ က​မ္ဘောဇဘဏ်က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သမ၀ါယမဘဏ်က စင်ကာပူ၊ အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က စင်ကာပူနဲ့ မလေးရှား၊ ဧရာဝတီဘဏ်က မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘဏ်လေးခုဟာ အရင်စစ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး ဘဏ်ဖွင့်ခွင့်ရတာ မကြာသေးတဲ့ ဘဏ်အသစ်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ရှည်လများ ရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဟာ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခွင့်ရဖို့ တင်ပြခဲ့ကြပေမယ့် ဗဟိုဘဏ်က လုပ်ပိုင်ခွင့် ချမပေးခဲ့ပါဘူး။
ပညာ​ရေး​နှင့်​ ကျန်း​မာ​ရေး​ဆိုင်ရာ အသုံး​စရိတ်များ​ တိုး​မြှင့်​
လာမယ့် ​ ဘဏ္ဍာ​ရေး​နှစ်အတွက် ပညာ​ရေး​ အသုံး​စရိတ်ကို ၂ ဆနဲ့​ ကျန်း​မာ​ရေး​ဆိုင်ရာ အသုံး​စရိတ်ကို ၄ ဆ တိုး​မြှင့်​သုံး​စွဲဖို့​ အစိုး​ရက လွှတ်​တော်ကို တင်သွင်း​လိုက်ပါတယ်။
ဒီက​နေ့​ ပြုလုပ်တဲ့​ ပထမအကြိမ် ပြည်​ထောင်စုလွှတ်​တော် အစည်း​အ​ဝေး​ တတိယပုံမှန် အစည်း​အ​ဝေး​မှာ အမျိုး​သား​စီမံကိန်း​နှင့်​ စီး​ပွား​ရေး​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်မှု ဝန်ကြီး​ဌာနနဲ့​ ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေက ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာ​ရေး​နှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာ​ငွေခွဲ​ဝေသုံး​စွဲ​ရေး​ ဥပ​ဒေမူကြမ်း​မှာ အခုလို တိုး​မြှင့်​တင်သွင်း​လိုက်တာပါ။
အရင်က အမျိုး​သား​ဝင်​ငွေ (GDP) ရဲ့​ ၁.၃ ရာခိုင်နှုန်း​လောက်ရရှိတဲ့​ ကျန်း​မာ​ရေး​ ကဏ္ဍအတွက် ၅.၂ ရာခိုင်နှုန်း​လောက်အထိ၊​ အရင်က GDP ရဲ့​ ၄.၁၃ ရာခိုင်နှုန်း​ ရရှိတဲ့​ ပညာ​ရေး​ကဏ္ဍအတွက် ၈.၂၆ ရာခိုင်နှုန်း​ကျော်​လောက် အထိ ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ရာခိုင်နှုန်း​အား​ဖြင့်​ တိုး​ပြီး​ရရှိလာမယ့်​ ​ငွေပမာဏ ကိန်း​ဂဏန်း​တွေကို​တော့​ အတိအကျ မသိရ​သေး​ပါဘူး​။
ဒီလိုတိုး​ မြှင့်​ သတ်မှတ်​ပေး​လိုက်တာနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ပြည်​ထောင်စု လွှတ်​တော်မှာ ထပ်မံ​ဆွေး​နွေး​ အတည်ပြုဖို့​ ရှိ​နေ​သေး​တယ်လို့​ အမျိုး​သား​လွှတ်​တော်ကိုယ်စား​လှယ် ဦး​ဘုန်း​မြင့်​အောင်က ​ပြောပြပါတယ်။
“၂၀၁၂ နဲ့​ ၂၀၁၃ မှာ ကျ​နော်တို့​ ပညာ​ရေး​ အသုံး​စရိတ်ကို​တော့​ လာမယ့်​နှစ် ဘတ်ဂျက်ကို ပြီး​ခဲ့​တဲ့​နှစ် ဘတ်ဂျက်ထက် ၂ ဆ တိုး​သုံး​ပါမယ်တဲ့​။ ကျန်း​မာ​ရေး​ကိုလည်း​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​နှစ် ဘတ်ဂျက်ထက် ၄ ဆ တိုး​သုံး​ပါမယ်။ အခုက စီမံကိန်း​နဲ့​ ဘတ်ဂျက်​တော့​ ချပြပြီဆို​တော့​ ​နောက်ထပ် ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေ တိုင်း​နဲ့​ပြည်နယ်ဝန်ကြီး​ချုပ်​တွေ ​ပြောလို့​ရှိရင် ​ဆွေး​နွေး​ချင်တဲ့​အ​ကြောင်း​နဲ့​ ​ဆွေး​နွေး​ချင်တဲ့​ ဝန်ကြီး​ဌာနနဲ့​ တိုင်း​နဲ့​ပြည်နယ် အစိုး​ရ​တွေက ​ခေါင်း​ချင်း​တိုက်ပြီး​တော့​ ​မေး​တာ​ပေါ့​။ ​ဆွေး​နွေး​ချင်တဲ့​ အစိုး​ရ ဝန်ကြီး​ဌာနနဲ့​ ကိုယ်​ဆွေး​နွေး​ချင်တဲ့​ အ​ကြောင်း​အရာကို​တော့​ ​ရှေ့​အပတ်ထဲမှာ စာရင်း​တွေ ​သေချာ ​ပေး​ထား​ပေါ့​ဗျာ။”
ဒီလို တိုး​မြှင့်​သတ်မှတ်ဖို့​ လျာထား​လိုက်တဲ့​အထဲမှာ​တော့​ အရင်က GDP ရဲ့​ ၂၃.၆ ရာခိုင်နှုန်း​ သုံး​စွဲ​နေတဲ့​ ကာကွယ်​ရေး​ ကဏ္ဍအတွက်ကိုလည်း​ ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်း​ ထက်မံတိုး​မြှင့်​လိုက်တဲ့​အတွက် ၂၅.၁ ရခိုင်နှုန်း​လောက်အထိ ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတိုး​ မြှင့်​သတ်မှတ်ရတဲ့​ အ​ပေါ်ကိုလည်း​ ဘဏ္ဍာ​ရေး​ဝန်ကြီး​က အိမ်နီး​နိုင်ငံ​တွေနဲ့​ နိုင်း​ယှဉ်ရင် ကာကွယ်​ရေး​အသုံး​စရိတ်ဟာ နည်း​ပါး​နေ​ကြောင်း​ လွှတ်​တော်အတွင်း​မှာ ​ပြောကြား​ခဲ့​တယ်လို့​ ဦး​ဘုန်း​မြင့်​အောင်က ဆိုပါတယ်။
“ကျ​နော်တို့​ နိုင်ငံရဲ့​ ကာကွယ်​ရေး​ အသုံး​စရိတ်က အ​မေရိကန် ​ဒေါ်လာနဲ့​ တွက်ကြည့်​လို့​ရှိရင် ဘီလီယံ နှစ်​ထောင်​ကျော်​လောက် ကျပါတယ်။ သူက​တော့​ ဘာကို ယှဉ်ပြလဲဆို​တော့​ စင်ကာပူမှာဆိုရင် ဘီလီယံ ရှစ်​ထောင်​ကျော် ရှိတယ်။ ထိုင်း​က ဘီလီလျံ ငါး​ထောင်​ကျော် ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့​ အင်ဒို၊​ မ​လေး​၊​ ဗီယက်နမ်​ပေါ့​ အာဆီယံနိုင်ငံ​တွေမှာ ကျ​နော်တို့​ နိုင်ငံထက် ကာကွယ်​ရေး​ အသုံး​စရိတ်များ​တဲ့​ နိုင်ငံ​တွေကို ​ထောက်ပြတာ​ပေါ့​။ အမှန်က​တော့​ အခွန်ဝန်ကြီး​က​တော့​ ဒီ ကာကွယ်​ရေး​စရိတ်ကို အာဆီယံနိုင်ငံ​တွေမှာ မများ​ဘူး​ဆိုတဲ့​ သ​ဘောမျိုး​ ရှု​ထောင့်​က​နေ သူကပြတာဗျာ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျ​နော်တို့​ ကိုယ်စား​လှယ်​တွေ ​ပြောတာက ထိုင်း​ထက် တဝက်သာသာ နည်း​တယ်ဆို​ပေမယ့်​ ကျ​နော်တို့​နိုင်ငံရဲ့​ ဝင်​ငွေထက် ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ ဝင်​ငွေက ဘယ်နှဆ​လောက် ရှိတယ်ဆိုတာ သူက ယှဉ်မပြနိုင်​သေး​ဘူး​။”
ဒါ့​အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တင်​နေတဲ့​ နိုင်ငံတကာရဲ့​ ​ချေး​ငွေ​တွေနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​တော့​လည်း​ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်က ​ချေး​ငွေဟာ အ​မေရိကန် ​ဒေါ်လာ ၈.၄ ဘီလီယံရှိပြီး​ ၁၉၈၈ က​နေ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ အစိုး​ရ လက်ထက်အထိ ၂.၆ ဘီလီယံ​ကျော် ရှိခဲ့​တာ​ကြောင့်​ စုစု​ပေါင်း​ အ​ကြွေး​ဟာ အ​မေရိကန် ​ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ နီး​ပါး​လောက် ရှိ​နေတယ်လို့​လည်း​ ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီး​က ​ပြောကြား​ခဲ့​ပါတယ်။
တိုင်း​ပြည်ရဲ့​ အရန်​ငွေက​တော့​ အ​မေရိကန်​ဒေါ်လာ ၇ ဘီလျံ​လောက် ရှိ​နေတယ်လို့​လည်း​ ဝန်ကြီး​က ​ပြောကြား​ခဲ့​ပါတယ်။
ဒီက​နေ့​ လွှတ်​တော် အစည်း​အ​ဝေး​မှာ ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး​ ဦး​ကျော်စွာခိုင် ရာထူး​မှ အနား​ယူတာကို သမ္မတက ခွင့်​ပြု​ကြောင်း​နဲ့​ တနင်္လာရီတိုင်း​ဒေသကြီး​ အစိုး​ရ ဝန်ကြီး​ချုပ် ဦး​ခင်​ဇော်အစား​ ဦး​မြတ်ကို ကို ​ပြောင်း​လဲ တာဝန်​ပေး​တာ​တွေကို ပြုလုပ်ခဲ့​ပါတယ်။
မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေလေ့လာရန် ကုလကိုယ်စားလှယ် ရောက်ရှိ
ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် ကင်တားနားဟာ ဒီကနေ့​ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာပြီး မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်မှု အခြေအနေတွေ လေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး​ ​ကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံကာ သူတို့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေတွေ​ ​တင်ပြသွားမယ်လို့​ ​ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးစစ်မြိုင်က ပြောပါတယ်။
“ကော်မရှင်ရဲ့ ​ ​လေးလအတွင်းမှာ​ ​ဆောင်ရွက်ချက်တွေက အတော်လေးများပြားပါတယ်။ ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းတွေကော အန်ကယ်တို့နဲ့ ထိတွေ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကကော ဒီကာလအတောအတွင်းမှာ အန်ကယ်တို့​ အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေအနေနဲ့ ကာလနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့​ ​အ​တွေ့​အကြုံအရ​ ​တော်တော်လေး​ ​ကြိုးစားပမ်းစား ဆောင်ရွက်ထားတာ တွေ့ပါတယ်။”
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကမှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ထိ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ တိုင်ကြားစာပေါင်း ၁၂၅၀ စောင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ ၉၆၇ စောင်ဖတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၅၇၂ စောင် ပို့ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယုံကြည်မှုကြောင့် ထောင်သွင်း အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကြေညာချက် ၃ကြိမ် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ ဦးစစ်မြိုင်က ပြောပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၆ ရက်တာ နေထိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ပါလီမန်အမတ်တွေ အပါအ၀င် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။
အခုလတ်တလော ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်ဖို့ ဖိအားပေးသွားမယ့်အပြင် အကျဉ်းထောင်တွေကိုလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်က လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံကိုတော့ လာမယ့် မတ်လမှာ ပြုလုပ်မယ့် ၁၉ ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ တင်ပြသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနားဟာ​ ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်ဆုံးအကြိမ် လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။
နှုတ်ဆက်သူများမှာ အလွန်များပြားသဖြင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမပြုလုပ်ဖြစ်
Update : 4: 56 pm ယခုအခါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အ
ဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် ညောင်ဦးလေဆိပ်သို့သွားရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ မူလက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးခရီးစဉ် ဒုတိယမြောက်ရွာဖြစ်သော ကျစ်တီးရွာတွင်ခရီးစဉ်အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသော် လည်း ရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် လာရောက်စောင့်ဆိုင်းကာ နှုတ်ဆက်သူများမှာ အလွန်များပြားသဖြင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမပြုလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒေသခံများကို ဦးစားပေးကာ နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါသွားသော7Day News သတင်းထောက်ကပြောကြားသည်။ ယနေ့ ညနေ ၆နာရီခွဲအချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လိုက်ပါလာသောအဖွဲ့များသည် ညောင်ဦးလေဆိပ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်ခွာလာမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပခုက္ကူ နေ့ ချင်းပြန်ခရီးစဉ်(ဓါတ်ပုံ)
မွန် ပြည်သစ်ပါတီ သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးစတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား ယနေ့နံနက် ၈ နာ၇ီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဦးအောင်မင်း သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင်သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပြီး ယနေ့ညနေတွင်ညစာစားပွဲပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်သည်ပါတီငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့တွင် ပါတီ ဒုဥက္ကဌ နိုင်ရော့စ အပါအ၀င် ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်များ နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် ၁၂ ဦးက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့ ရှိ ကမ်းနားလမ်းဟိုတယ် (Strand) တွင်အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး တွက်ဆွေးနွေးမည်။ ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဘက်မှဆွေးနွေးရန် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ပေးသူ ဦးညွန်အုန်းမြင့်၏ The Voice Weekly သို့ ပြောကြားချက်များကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
"ဆွေးနွေးရင် လက်မှတ်ထိုးဖြစ်ဖို့က သေချာတယ်။ နည်းနည်းတော့ခက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရဦးမယ်။ မွန်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အမြင်က အရင်တစ်ခါလက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လဲတုန်းကလိုဖြစ်မှာစိုးတယ်။ သူတို့ မှာစစ်သား အယောက် ၅၀၀၀ လောက်ရှိရာက ၁၀၀၀ လောက်ပဲကျန်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးကလည်းမတည်မြဲခဲ့ဘူး။
"မွန်ခေါင်းဆောင်တွေ အဓိကတောင်းဆိုချင်တာကနိုင်ငံရေး မှာ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ မွန်တစ်မျိုးသားလုံး နိုင်ငံတော်မှာ ဘယ်အခန်းကဏ္ဍ ကပါဝင်မလဲဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်မယ်။ မွန်ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့အဆင်သင့် ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ နောက်ပြီး မွန် ခေါင်းဆောင် နိုင်ယက္ခနဲ့ ကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မွန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လွတ်ပေးဖို့၊ မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ စာပေ မွန်ပြည်နယ်သင်ကြားဖို့၊ မွန်ပြည်နယ်မှာ မွန်ဘာသာစကားရုံးသုံးဘာသာဖြစ်ဖို့ အဲဒါတွေ တောင်းဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊
"ကျွန်တော်တို့ အကျိုးတော်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုကတည်းလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်သေချာအောင်လုပ်ထားရတာပေါ့။ အခုမွန်ပြည်သစ်ပါတီက ဒီကိုဆွေးနွေးဖို့သက်သက်ပဲလာတာပေါ့။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ က ဗဟိုကော်မီဝင်တွေ သဘောထားဖြစ်တာပေါ့ ။ အကျိုးဆောင် အနေနဲ့ ကတော့ဒီမှာညှိနိုင်သလောက် ရအောင်ညှိ နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။ အစိုးရနဲ့ ညှိလိုက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ညှိလိုက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှုကတော့ တ်ာတော်တည်ဆောက်ပြီးနေပါပြီ၊
"နိုင်ငံတစ်ခုမှာ အင်အားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု အခြေအနေကမတူညီကြဘူး။ တစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲ့ကွားခြားတယ်။ KNU နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒုက္ခတွေနှစ်ရှည်လများ ခံစားလာရတယ် အစိုးရဘက်ကလည်း ဒီတိုင်းပဲ ခံလာရတယ် အဲဒီတော့နှစ်ဖက်လုံးမြန်မြန်ပြီးချင်တယ်။ အခုမွန်ကတော့ သူတို့ အရင်တခေါက်လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလဲလှယ်ခဲ့တုန်းကအခြေအနေမျိုး တပ်လည်းရူံး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းရှုံးဖြစ်မှာကြောက်နေတယ်"
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့တွင် ဈေးနှုန်း ထက်ဝက်နီးပါး လျှော့ချရောင်းချ ပေးသွားမည့် WiMax New Service
Broadband WiMax New Service ကိုစတင် ၀န်ဆောင်မှုပေးတော့မှာဖြစ်ပြီး စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့မှာ ပုံမှန်တန်ဖိုးရဲ့ ဈေးနှုန်း ထက်ဝက်နီးပါး လျှော့ချရောင်း ချပေးသွား မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုဈေးနှုန်း လျှော့ချပေးရာမှာ ပုံမှန်တန်ဖိုး ကျပ်ခြောက်သိန်း သုံးသောင်း အစား ကနဦးတပ်ဆင်ခ ကျပ် သုံးသိန်းခြောက်သောင်းနဲ့ရောင်းချ မှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း မှာတော့ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းအတိုင်း သာ ရောင်းချ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ WiMax New Service ဟာ အရင်လို Outdoor အင်တန်နာနဲ့ တိုင်ထောင်ပြီး သုံးစရာမလိုဘဲ Indoor ယူနစ် တစ်ခုတည်းနဲ့ သုံးလို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုစတင် ၀န်ဆောင်မှုပေးမယ့် WiMax New Service ကတော့ ငွေ သွင်းပြီးတာနဲ့ စတင်အသုံး ပြုလို့ ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ WiMax New Service ကို ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကြီး ၁၀ရုံကို တပ်ဆင်လှူဒါန်းမှု များ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Redlink Communications မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက် အရ သိရပါတယ်။
လူကြီးမင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုတယောက် ကျပ် ၃၀၀၀ နူန်းကောက်ခံနေ (ပေးစာ)
ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် မှ ပါမောက္ခက လူကြီးမင်္ဂလာဆောင်အတွက်နိူင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုတယောက် ၃၀၀၀ နူန်းကောက်ခံနေတယ်။
ကျွန်မပြောတောမပြောခြင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်သမတ ဦးသိန်းစိန်က Good
Governance and Clean Government အကောင်အထည်ဖေါ်မည်လိုပြောခဲ့ပေမယ့်
ဖြစ်စဉ်က ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတကက်သိုလ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပါမောက်ခချုပ်
သိအောင်တင်ပြခြင်တာပါ။ 30-1-2012 ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကိုမင်္ဂလာဖိတ်စာ တွေရောက်လာတယ်။ ဖိတ်စာက ပညာရေး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြအေးရဲ့သမီး (ရတနာပုံ၊ ဓာတုဗေဒဌာနမှာ
သရုပ်ပြလုပ်နေတဲ့ သူ) ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပါ။ ကထိက ရာထူးနဲ့အထက်ကိုပို့တာပါ။
ပါမောက်ခများ၊ ဌာနမှူးများကိုတော့ ဖိတ်စာတစ်စောင်စီ ပို့ပြီး
ဖိတ်စာအိတ်မှာလည်း အဲ့သည့်တွဲဖက်ပါမောက်ခ၊ ပါမောက်ခများ၊
ဌာနမှူးများရဲ့နာမည်ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ အသေအချာရိုက်ထားပါတယ်။
အဲ့သည့်ဖိတ်စာတွေနဲ့ ပါမောက်ခချုပ် ဦးကျော်ရဲထွန်းရဲ နှုတ်မိန့်အရ
ကထိကတစ်ဦးကို 3000 ကျပ်၊ တွဲဖက်ပါမောက်ခတစ်ဦးကို 5000 ကျပ်၊
ပါမောက်ခများနဲ့ ဌာနမှူးများကို တစ်ဦးလျှင် အနည်းဆုံး 10000
ကျပ်စီထည့်ရမည်ဟု ဆပ်ကြေးကောက်သလို အတင်းအကြပ်ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
အခြားသော အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ရော စိတ်စေတနာမပါဘဲ
အောင့်သက်သက်နဲ့ထည့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဆရာမအများစုက လုံးဝမကျေနပ်ပေမဲ့လည်း
ဘာမှပြန်မပြောရဲခဲ့ကြဘူး။ အဲ့သည်လိုကောက်ခံတာ ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြအေးက
ကောက်ခိုင်းတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ပါမောက်ခချုပ် ဦးကျော်ရဲထွန်းကဘဲ
ဖော်လံဖားချင်တာနဲ့ဘဲ ကောက်တာလာတော့မသိဘူး။ ဒါပေမယ့်
ဆရာဆရာမတွေရဲ့ လည်မျိုကိုတက်နင်တာဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာဖြစ်နေချိန်မှာ
အစိုရရဲ့ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့Good Governance and Clean Government
မိမိလက်အောက်မှာ အဲ့သည်လိုဖော်လံဖား ပါမောက်ခချုပ်တစ်ယောက် ရှိနေခြင်းဟာ
အဲ့သည်လို ပါမောက်ခချုပ် ဦးကျော်ရဲထွန်း က မိမိ၏မျက်နှာရရေးအတွက်
ဆရာဆရာမတွေကို မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး
အရေးယူပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် သမတကြီးအားတင်ပြအပ်ပါသည်။
အမေစု ကို မြိုင်မြို့နယ်၊ ပဲပင်တိုက်ကျေးရွာမှ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်၍ အိုးစည်ဗုံများဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့
Supporters shake hands with Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi as she arrives in Bagan on her way to Pakoku in Bagan Township January 31, 2012. The United Kingdom will be hostingavisit by Suu Kyi toaDepartment For International Development (DFID) funded livelihood project in the dry zone near Pakoku. The project is run byalocal partner which the DFID supports through multi-donor LIFT funds (Livelihoods and Food Security Trust Fund).
မြိုင်မြို့နယ်၊ ပဲပင်တိုက်ကျေးရွာမှ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်၍ အိုးစည်ဗုံများဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့ပြီး ယင်းတို့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်အတွက်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဒေသခံများ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရေး လုပ်ဆောင်ပေးရန် အတွက် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပဲပင်တိုက်ကျေးရွာတွင် လူထုကို မိန့်ခွန့်တိုပြောဆိုခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ စိုက်ခင်းများကို လေ့လာလျက်ရှိသည်။
နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ၂၀ မိနစ်တွင် ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုက်ပါသော ယာဉ်တန်းသည် မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက် နေပြီဖြစ်ပြီး မြိုင်အ၀င်လမ်းတွင် မြို့ခံပြည်သူများက တခဲနက် ကြိုဆိုလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်မဟုတ်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်ခင်သောပြည်သူများက လာရောက်နှုတ်ဆက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်သူများ၏ တခဲနက်ကြိုဆိုမှုများကြောင့် ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုက်ပါသော ယာဉ်တန်းသည် တဖြည်းဖြည်းသာ ရွေ့လျားသွားလာရသောကြောင့် မကွေးခရီးစဉ်သည် သတ်မှတ်ထားသောခရီးစဉ်အချိန်ဇယားထက် အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်ဟု The Voice သတင်းထောက် သတင်းပေးပို့သည်။
Update: နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ယာဉ်တန်းသည် ကျောက်ဆောက် ရွာကို ကျော်ဖြတ်လာပြီး ကျေးရွာလူထုက ကားလမ်းဘေးမှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ဗြိတိန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့(DFID) က ဖိတ်ကြားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မကွေးခရီးစဉ် အချိန်ဇယား
-မနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီ ---------မြိုင်၊ ပဲပင်တိုက်ကျေးရွာသွား။
-မနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ၁၁ နာရီ ၃၀ ----ပဲပင်တိုက်ကျေးရွာတွင် လှည့်လှည်။
-မနက် ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ ၁၂ နာရီအထိ----- ပဲပင်တိုက်ကျေးရွာရှိ စီမံကိန်းများကို ကြည့်ရှု။
ပခုက္ကူမြို့မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပခုက္ကူတစ်မြို့လုံးမှ ပြည်သူပေါင်းမြောက်မြားစွာက လာရောက်နှုတ်ဆက်နေကြပြီး “အမေစု ကျန်းမာပါစေ”ဟု အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိုင်မြို့နယ်ခရီးစဉ် စတင်
မြိုင်၊ ဇန်န၀ါရီ- ၃၁
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ပထမဆုံးဦးဆုံး နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ထားဝယ်သို့သွားရောက်ပြီး တစ်ရက်ခြားတွင်(ယနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၃၁) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ နှစ်ရွာသို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန(DFID)က ဆောင်ရွက်နေသော ပရောဂျက်များကို လေ့လာရန် ထွက်ခွာလာပြီဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ အဲပုဂံလေယာဉ်ဖြင့် နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ခွာပြီး ညောင်ဦးမြို့သို့ ၉း၁၅ မိနစ်တွင် ရောက်ရှိလာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေရာတိုင်းတွင် ဒေသခံများက ပျော်ရွှင်စွာ ကြိုဆိုနေကြသည်။
ညောင်ဦးမြို့မှ မြိုင်မြို့နယ်သို့ သွားရောက်ရာလမ်းတလျောက်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် ပခုက္ကူမြို့တွင်းသို့ ကားလမ်းမအတိုင်း ကားတန်းဖြင့်ဖြတ်သန်းလာသောအခါ ဒေသခံများက ထွက်၍ကြိုဆိုနေကြသည်။ ပခုက္ကူမြို့တွင်းတွင် ကြိုဆိုသည့် ကြည့်ရှုသူများမှာ များပြားလွန်းသောကြောင့် မြို့မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိရန် မှန်းထားချိန်ထက် နောက်ကျနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။
DFID သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသောကဏ္ဍများအတွက် အဓိကကူညီပံ့ပိုးနေသော စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယခုခရီးစဉ်မှာ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာလူထုကို ထောက်ပံ့နေသော DFID ၏ စီမံကိန်းကို လေ့လာသော ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
Update : 11.20 AM ပခုက္ကူမြို့တွင် လမ်းဘေးဝဲယာတစ်လျှောက်မှ အရွယ်စုံကြိုဆိုသူများပြားလွန်းသောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုက်ပါလာသော ကားတန်းမှာတရွေ့ရွေ့သာမောင်းနိုင်ပြီး မြို့ကိုဖြတ်သန်းရန် မိနစ်၅၀ခန့် အချိန်ယူခဲ့ရသည်။
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားပခုက္ကူမြို့ ပြည်သူများ သောင်းသောင်းဖျဖျကြိုဆို "
Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi shakes hands with people inavillage in Pakoku township January 31, 2012. The United Kingdom will be hostingavisit by Suu Kyi toaDepartment For International Development (DFID) funded livelihood project in the dry zone near Pakoku. The project is run byalocal partner which the DFID supports through multi-donor LIFT funds (Livelihoods and Food Security Trust Fund).
Photo By Soe Zeya Tun / REUTERS
ပေါ်ပြူလာနယူးစ် သတင်းထောက်၏ သတင်းပေးပို့ ချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပခုက္ကူမြို့ သို့ ရောက်ရှိနေပြီး ပခုက္ကူမြို့ ခံ ပြည်သူလူထုများ သောင်းသောင်းဖျဖျကြိုဆို